Kupwanya Resistant Carbon Fiber Telescopic Pole YeSolar Kuchenesa Pole
Aya matanda ecarbon fiber telescoping anotsvedza zvisingaite uye anogona kukiyiwa chero akareba, nyore kushandisa, nyore kutakura uye nyore kuisa. Zvinogona kuwedzerwa kusvika pakureba kureba mumaminetsi mashoma nekuidhonza uye nekukiya yega yega telescoping chikamu.
Iyi 100% kabhoni fiber telescopic pole yakaoma uye inopwanya kusagadzikana, kurema-kurema uye inotakurika, inosvika kuchikamu cheshanu chehuremu hwesimbi uye yakawanda kakasimba kusimba, matanda ecarbon fiber telescoping akakodzera kutsiva simbi machubhu / matanda.
Tsika Yakareruka Telescopic Matanda Epaneru Kuchenesa Multi Ruvara
Glossy 10m Round Carbon Telescopic Pole Kune Solar Panel Kuchenesa
Solar pani yekuchenesa pols pa25ft yakakwana kune mazhinji mabasa ekuchenesa, akavakwa ne100% kabhoni fiber. Iyi telescopic pole isinganzwisisike yakaoma, yakapusa uye yakasimba kwazvo. Mune iyo renji, ivo vanogona kuchinjiswa kune chero hurefu, uye iwe unobvumidzwa kuwedzera kana kubvisa zvikamu kuti zvienderane neinodiwa yekushanda kukwirira, danda rimwe remabasa ese.
Iyo patent ine transversal lateral kirampini dhizaini inobata iyo pole zvakanyanya kuomarara kupfuura mamwe marudzi emhando. Inovhurwa zviri nyore uye yakavharwa kunyangwe pamwedzi inotonhora yechando panodiwa magirovhosi.
Chiedza Kurema Circle Washington City Offices Round danda Yakakwirira Simba reSolar Panel Kuchenesa
Multifunction fiberglass telescopic rezuva yekuchenesa pole
100% Yakakwira Modulus Carbon Fiber Telescoping Pole Kune Solar Panel Kuchenesa
72FT Chiedza uremu hwemhando yepamusoro telescopic pole yekuchenesa kwezuva
20m kabhoni faibha rezuva paneeli yekuchenesa pole telescopic pole.
15FT yakawanda - inoshanda kabhoni fiber telescopic pole yezuva yekuchenesa pole yekukwira kusvika uye kureba kusvika
18FT Carbon Fiber Poles / Telescopic Fiberglass Solar Panel Kuchenesa pole
Iyi 18FT kabhoni fiber yekuwedzera pole yakaoma uye inopfeka kusagadzikana. Yakagadzirwa ne100% kabhoni fiber, iwo akareruka-huremu, anotakurika, anosvika kuchikamu cheshanu chehuremu hwesimbi uye kakawanda akasimba, matanda ekabhoni fiber telescoping akanyatso
20 Ft Carbon Fiber Telescopic Pole Ye Solar Kuchenesa Pole UV Yakasimba
Multifunction Washington City Offices rezuva paneeli yekuchenesa pole Gutter kuchenesa
Tsvimbo yekutsvaira kwezuva inonyanya kushandiswa pakuchenesa zuva nezuva uye kugadzirisa kwe photovoltaic. Dhizaini yetsvimbo yeteresikopiki inosangana nezvinodiwa zvekuchenesa-kure-kure uye kwakakura, izvo zvakachengeteka uye zvakavimbika.